SPC tsara indrindra Flooring Flooring Flooring Manufacturer sy Factory | Iverson
Ny rihana SPC dia hita fa toy ny fampiasa ambony ambany amin'ny tsena. Na dia somary manify aza ny hazo fisaka, dia misy fanoherana sy faharetana maharitra izy ireo. Ny kalitao tsara amin'ny takelaka anaovana dia mahatonga azy tsy mahazaka akanjo, izay manazava ny fampiasana betsaka azy eo amin'ny tontolon'ny varotra sy toerana fivezivezena be. Ankoatr'izay, ny firakotra UV-ny dia mahatonga ny tany tsy ho matevina izay tena mety amin'ny olona manana biby fiompy lehibe. Ny gorodona SPC dia manana hakitroka avo lenta, ireo toetra ireo dia maharitra maharitra.
Misaotra ny 100% tsy tantera-drano, ny rano dia tsy hampivoatra ny gorodona na hikorontana na hibontsina intsony. Tena misy dikany izany. Noho ireo tombo-tsoa miavaka ity dia mampiasa rindrambaiko spc ny olona ao an-dakozia sy fidiany. Ny fonosana manokana koa dia mahatonga ny gorodona tsy ho solafaka rehefa mihaona rano. Na aiza na aiza no mety hanjary olana ny rano dia safidy mety indrindra ny gorodon'ny spc. Ny trano fisakafoanana sy trano fandraisam-bahiny mazàna dia roa amin'ny orinasa mahazatra indrindra mampiasa gorodona SPC. Underlayment koa dia safidy iray ho an'ny fampiononana farany tongotra sy fifehezana ny feo.
Raha mitady hanamboatra ny gorodon'ny tranonao ianao dia diniho ny gorodona SPC. Farany fa tsy farany, mpanamboatra rindrambaiko SPC sy mpamatsy matihanina fotsiny izahay izay afaka manampy anao hitahiry ny fotoanao sy ny volanao. Tianay ny ho mpamatsy mpanohana anao, mifandraisa amiko amin'ny santionany maimaimpoana sy ny vidin'ny orinasa-mivantana Raha te hanana teny nindramina.
Teo aloha: SPC Flooring henjana Core Interlocking Click Lock PVC Vinyl Flooring
Manaraka: SPC Flooring Tsindrio mifamatotra amin'ny Ixpe Backing